Chii chinonzi mutero wemuhoro wega: chii, ndiani anobhadhara uye marii inobhadharwa | Economy Finance
Claudi casals | 13/01/2022 14:59 | Yakagadziridzwa ku 13/01/2022 15:01 | Mitero
Kune mitero yakawanda iripo nhasi. Imwe yeakanyanya kukosha uye yakakosha kuvanhu vese inonzi mutero wemuhoro wega. Zvinogona kutaurwa kuti kunzwisisa kwayo chisungo chehurumende kune vese vagari vemuSpain. Kuti tikubatsire kunzwisisa zviri nani mutero uyu, tiri kuzotsanangura kuti IRPF chii.
Kana uine mibvunzo pamusoro pemutero uyu, ndinokurudzira kuti urambe uchiverenga. Tichatsanangura kuti mutero wemuhoro chii, ndiani anoubhadhara uye kuti marii inobhadharwa.
1 Chii chinonzi mutero wemari uye anoubhadhara?
1.1 Kushanda muHomwe
2 Marii inobhadharwa pamutero wemuhoro wega?
2.1 Zvinhu zvinopesvedzera huwandu hwemutero wemari yemunhu
Chii chinonzi mutero wemari uye anoubhadhara?
Kuti tizive kuti IRPF chii, zvakakosha kuti tizive zvinoreva maacronyms ayo: Mutero Wemari Yemunhu. Uye munhu wenyama chii? Uyu munhu anogona kuva nekodzero uye zvaanosungirwa. Chaizvoizvo, munhu wechisikigo munhu anogara kuSpain.
Kuonekwa semugari muSpain, mavambo kana nyika hazvina basa. Kana iwe uchigara nguva zhinji munyika ino, unoonekwa semugari. Naizvozvo, avo vanhu vane chizvarwa cheSpain vanopedza nguva yakawanda vari kunze kwenyika havaonekwe sevagari muSpain, saka havafanirwe kubhadhara mutero uyu. Zvisinei, pane zvimwe zvisizvo, zvakadai semadiplomate. Mukupesana, vatorwa vanogara munyika ino vanofanira kuribhadhara, kunyangwe vasina chizvarwa cheSpanish.
Naizvozvo, mutero wemuhoro wega wega mutero unotemerwa munhu wese anobatsira mukuchengetedza Hurumende. Ndiko kuti: Ndivo vagari vanobhadhara mutero uyu. Gare gare tichatsanangura kuti ndezvipi zvinhu zvinokonzeresa mari inofanirwa kuendeswa kuHurumende.
Isu tese tinoziva kuti pakupera kwegore, pane zvishoma zvasara kuita iyo inotyisa mari statement. Mune zvimwe zviitiko inguva yekubhadhara mari yakawanda kuHomwe, uye mune dzimwe ndiyo Treasury iyo inodzorera imwe yemari yakabhadharwa. Kwegore rose, vanhu vanobhadhara kare pamwedzi yemutero kuTreasury. Vese vashandi vane muhoro vanochengeta mariri, kureva kuti, havagamuchire muhoro wavo wakakwana sezvo chikamu chinochengetwa nemushandirwi kuti chipinde muHomwe pachinzvimbo chemushandi. Izvi zvinonzi "kubhadhara paakaundi".
Ndizvo zvimwe chete zvinoitika kune vanozvimirira. Chero munhu paanovabhadharira bhiri, painvoice imwe chete iyoyo vanonyima chikamu chinotarwa nemutemo. Chikamu ichocho chakanyimwa chinopinzwa gare gare muHome Yehomwe pachinzvimbo chako.
Chero bedzi mari inobhadharwa kuTreasury yakawandisa maererano nezvinoenderana nemunhu ari kubvunzwa kubhadhara, izvi zvinogona kuda kudzoserwa kunoenderana nemari yacho. Asi chenjera, zvakapesana zvinogona kuitika zvakare: Kana isu takabhadhara zvishoma pane yedu mugove, Treasury ichatora imwe yasara.
Marii inobhadharwa pamutero wemuhoro wega?
Zvino zvatava kuziva kuti mutero wemuhoro wega wega chii, tava kuzotsanangura kuti marii inobhadharwa uye kuti ndezvipi zvinhu zvinopesvedzera mari iyi. Kubhadhara mutero uyu, munhu ari mubvunzo anofanira kuzadza fomu zana rakagadzirirwa ne Tax Agency. Kana fomu razadzwa, kuverenga kwekupedzisira kunoitwa pane zvaunofanira kubhadhara kana zvaunofanira kudzoserwa. Mari iyo mugari wega wega anofanira kubhadhara Izvo zvinoenderana nepamusoro pezvese pamari yako, asiwo pamamiriro ako ega. Kana tichitaura pamusoro pemari, zvakakosha kuziva kuti mutero unofambira mberi. Kureva kuti: Paunowana mari yakawanda, ndipo paunofanira kubhadhara. Muna 2022, mabhureki emutero anotevera anotangwa:
Kusvikira ku € 12.450 pagore: 19% yemutero wega wega
€12.450 kusvika €19.999 pagore: 24% mutero wemari
€20.000 kusvika €35.199 pagore: 30% mutero wemari
€35.200 kusvika €59.999 pagore: 37% mutero wemari
€60.000 kusvika €299.999 pagore: 45% mutero wemari
Kubva € 300.000 pagore: 47% yemutero wemunhu
Zvinhu zvinopesvedzera huwandu hwemutero wemari yemunhu
Pakuita chirevo chemari, vanhu vanowanzo bhadharira mihoro yavo yegore rinoenderana. Asi zvakadaro, Kwete chete mari inobva kubasa inofungidzirwa, asi yose inosanganiswa. Iyi mari isiri yevashandi inogona kubatsira, rubatsiro, mari kubva kune zvigadzirwa zvemari, nezvimwe. Zvose zvinofanira kuziviswa.
Nekudaro, kwete chete mari inotangwa pakuita chirevo chemari, kana zvisiri uyewo mugariro womunhu oga womumwe nomumwe. Pane zvinhu zvakati wandei zvinogona kudzikisa mari inobhadharwa, senge hurema, kuve nehama dzakavimbika, kuve pamusoro pemakumi matanhatu neshanu, nezvimwe. Nenzira iyi, vanhu vaviri vane huwandu hwemari yakaenzana, vangasabhadhara zvakafanana, sezvo mamiriro avo akasiyana.
Chekupedzisira, isu tichiri kufanira kutaura izvo zvinonzi "kubviswa". Idzi ndedzimwe mari dzakashandiswa nemunhu ari kutaurwa uye dzinoderedza mari inofanira kubhadharwa kuHomwe. Izvi zvinowanzova mipiro kune zvirongwa zvepenjeni, mipiro, nezvimwe.
Ndinovimba kuti chinyorwa ichi chajekesa kwauri kuti mutero wemuhoro wega chii.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Mitero » Chii chinonzi mutero wemuhoro wega